နယူးကာဆယ်-ချယ်လ်ဆီးပွဲမှာ ဒီအချက်တွေကို ပရိသတ်တွေ သတိပြုမိလိုက်ရဲ့လား
နယူးကာဆယ်-ချယ်လ်ဆီးပွဲမှာ ပရိသတ်တွေ မသိလိုက်တဲ့ ထူးခြားချက်များ
27 Aug 2018 . 11:33 AM
ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ နယူးကာဆယ်နဲ့ပွဲမှာ နောက်ခံလူ ယက်ဒ်လင် Yedlin ရဲ့ OG ကြောင့် (၃)မှတ်ရရှိခဲ့ပြီး ရာသီအစ (၃)ပွဲဆက်နိုင်ပွဲ ရယူခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင် ဆာရီ Serri ရဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ရလဒ်ကောင်းတွေနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂ် အဆင့်(၂)နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါပြီ။ နယူးကာဆယ်နဲ့ ချယ်လ်ဆီးတို့ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ပရိသတ်တွေ သတိမထားမိလိုက် ထူးခြားချက်တချို့ရှိခဲ့ပြီး အဲဒါကို နာမည်ကျော် ဗြိတိန်သတင်းစာ Daily Mail က အခုလို ဖော်ပြခဲ့တယ်။
ပွဲ(၂၀၀)ပြည့်ခဲ့တဲ့ အက်ဇ်ပီလီကွယ်တာ Azpilicueta
မော်ရင်ဟို Mourinho ၊ ပြီးတော့ ကွန်တီ Conte ၊ အခု ဆာရီ Sarri ချယ်လ်ဆီးနည်းပြတွေ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ပြောင်းလဲခဲ့ပေမယ့် အက်ဇ်ပီလီကွယ်တာကတော့ ခံစစ်တစ်နေရာကို အပိုင်သိမ်းထားနိုင်ဆဲပါ။ ခံစစ်မှာ နေရာစုံကစားနိုင်တဲ့ ဒီ စွယ်စုံရကစားသမားဟာ အခုဆို ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲ(၂၀၀)ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ့အတူ အောင်မြင်မှုတွေ အများကြီး ရယူနိုင်ခဲ့သူ အက်ဇ်ပီလီကွယ်တာဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် အကောင်းဆုံးနောက်ခံလူတွေထဲမှာ တစ်ဦးအပါအ၀င်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နယူးကာဆယ် ၁၁ VS ယော်ဂျင်ဟို Jorginho
နယူးကာဆယ်နဲ့ပွဲ ပထမပိုင်းမှာ ယော်ဂျင်ဟိုဟာ ဘောလုံးပေးပို့မှုပေါင်း (၉၂)ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဲဒီထဲမှာ တိကျတဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှုက (၈၆)ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်။ ဒါဟာ နယူးကာဆယ်တစ်သင်းလုံး ဘောလုံးပေးပို့တဲ့အကြိမ်ထက် (၁၉)ကြိမ်ပိုများခဲ့ပြီး ပြောရရင်တော့ နယူးကာဆယ်ကစားသမား (၁၁)ယောက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ယော်ဂျင်ဟို တစ်ယောက်တည်းက စွမ်းဆောင်ပြခဲ့သလိုပါပဲ။ “Pass Master”လို့ တင်စားခံထားရတဲ့ ယော်ဂျင်ဟိုအတွက် ဒီစွမ်းဆောင်ရည် မှတ်တမ်းက ကျေနပ်စရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ပွဲကြည့်စင်မှာ အချိန်ကုန်ခဲ့ရတဲ့ နယူးကာဆယ်အသင်းခေါင်းဆောင်
နယူးကာဆယ်အသင်းခေါင်းဆောင် လက်ဆဲလက်စ် Lascelles ဟာ ဒဏ်ရာလည်း မရှိဘဲနဲ့ ချယ်လ်ဆီးနဲ့ပွဲကို ပရိသတ်တစ်ဦးအဖြစ် ကြည့်ရှုခဲ့ရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်မှာ အသင်းရဲ့နည်းဗျူဟာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နည်းပြဘင်နီတက်ဇ် Benitez နဲ့ စကားများခဲ့လို့ပါပဲ။ ဘင်နီတက်ဇ်ကလည်း သူ့နည်းဗျူဟာတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဆတ်ဆတ်ထိ မခံတတ်တာကြောင့် ချက်ချင်းပဲ လက်ဆဲလက်စ်ကို ပွဲထွက်ကစားသမားစာရင်းက ချန်လှပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကို ဘင်နီတက်ဇ်က “ကျွန်တော်တို့မှာ နောက်ခံလူတွေ အများကြီးရှိတာပဲ”လို့ ခပ်မာမာပဲ ဖြေကြားခဲ့တယ်။
အရှက်ရစရာ အမှားကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ITV
နာမည်ကျော် ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ITV ရဲ့ အမှားကတော့ အရှက်ရစရာလည်းကောင်း၊ ရယ်ဖို့လည်း ကောင်းခဲ့တယ်။ နယူးကာဆယ်နဲ့ပွဲ ပထမပိုင်းမှာ ချယ်လ်ဆီးနောက်ခံလူ ရူဒီဂါ Rudiger ရဲ့ကန်ချက် ဂိုးပေါက်နဲ့ သိသိသာသာ လွဲချော်ခဲ့ပေမယ့် ITV က သူတို့ရဲ့ Twitter မှာ ‘GOALLLL! Out of nowhere, Rudiger sends inapowerful drive,’ဆိုပြီး ရေးသားခဲ့တာပါ။ ITV က ရူဒီဂါကို လှောင်ချင်တာလား၊ ဘယ်လိုလဲဆိုတာ မသိပေမယ့် ချယ်လ်ဆီးပရိသတ်တွေကတော့ ဒီမှားယွင်းမှုကို မကျေနပ်ကြပါဘူး။ ITV က အဲဒီ Post ကို ချက်ချင်းပြန်ဖျက်ခဲ့ပေမယ့်လည်း Screen Shot တွေ မိခဲ့လို့ အရှက်ကွဲခဲ့ရပါတော့တယ်။
ဒါတွေကတော့ နယူးကာဆယ်-ချယ်လ်ဆီးပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ထူးခြားချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပွဲတွေကျရင်လည်း ဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိမလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားဦးမှာပါ . . . .
Photo:Twitter,Evening Standard,Daily Maiil
နယူးကာဆယျ-ခယျြလျဆီးပှဲမှာ ပရိသတျတှေ မသိလိုကျတဲ့ ထူးခွားခကျြမြား
ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ နယူးကာဆယျနဲ့ပှဲမှာ နောကျခံလူ ယကျဒျလငျ Yedlin ရဲ့ OG ကွောငျ့ (၃)မှတျရရှိခဲ့ပွီး ရာသီအစ (၃)ပှဲဆကျနိုငျပှဲ ရယူခဲ့တယျ။ အခုဆိုရငျ ဆာရီ Serri ရဲ့ ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ ရလဒျကောငျးတှနေဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂျ အဆငျ့(၂)နရောမှာ ရပျတညျနပေါပွီ။ နယူးကာဆယျနဲ့ ခယျြလျဆီးတို့ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ပရိသတျတှေ သတိမထားမိလိုကျ ထူးခွားခကျြတခြို့ရှိခဲ့ပွီး အဲဒါကို နာမညျကြျော ဗွိတိနျသတငျးစာ Daily Mail က အခုလို ဖျောပွခဲ့တယျ။
ပှဲ(၂၀၀)ပွညျ့ခဲ့တဲ့ အကျဇျပီလီကှယျတာ Azpilicueta
မျောရငျဟို Mourinho ၊ ပွီးတော့ ကှနျတီ Conte ၊ အခု ဆာရီ Sarri ခယျြလျဆီးနညျးပွတှေ တဈယောကျပွီး တဈယောကျ ပွောငျးလဲခဲ့ပမေယျ့ အကျဇျပီလီကှယျတာကတော့ ခံစဈတဈနရောကို အပိုငျသိမျးထားနိုငျဆဲပါ။ ခံစဈမှာ နရောစုံကစားနိုငျတဲ့ ဒီ စှယျစုံရကစားသမားဟာ အခုဆို ပရီးမီးယားလိဂျပှဲ(၂၀၀)ပွညျ့ခဲ့ပါပွီ။ ခယျြလျဆီးအသငျးနဲ့အတူ အောငျမွငျမှုတှေ အမြားကွီး ရယူနိုငျခဲ့သူ အကျဇျပီလီကှယျတာဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ အကောငျးဆုံးနောကျခံလူတှထေဲမှာ တဈဦးအပါအဝငျအဖွဈ သတျမှတျခံထားရသူလညျး ဖွဈပါတယျ။
နယူးကာဆယျ ၁၁ VS ယျောဂငျြဟို Jorginho
နယူးကာဆယျနဲ့ပှဲ ပထမပိုငျးမှာ ယျောဂငျြဟိုဟာ ဘောလုံးပေးပို့မှုပေါငျး (၉၂)ကွိမျ ပွုလုပျခဲ့ပွီး အဲဒီထဲမှာ တိကတြဲ့ ဘောလုံးပေးပို့မှုက (၈၆)ကွိမျရှိခဲ့တယျ။ ဒါဟာ နယူးကာဆယျတဈသငျးလုံး ဘောလုံးပေးပို့တဲ့အကွိမျထကျ (၁၉)ကွိမျပိုမြားခဲ့ပွီး ပွောရရငျတော့ နယူးကာဆယျကစားသမား (၁၁)ယောကျရဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို ယျောဂငျြဟို တဈယောကျတညျးက စှမျးဆောငျပွခဲ့သလိုပါပဲ။ “Pass Master”လို့ တငျစားခံထားရတဲ့ ယျောဂငျြဟိုအတှကျ ဒီစှမျးဆောငျရညျ မှတျတမျးက ကနြေပျစရာဖွဈခဲ့ရတယျ။
ပှဲကွညျ့စငျမှာ အခြိနျကုနျခဲ့ရတဲ့ နယူးကာဆယျအသငျးခေါငျးဆောငျ
နယူးကာဆယျအသငျးခေါငျးဆောငျ လကျဆဲလကျဈ Lascelles ဟာ ဒဏျရာလညျး မရှိဘဲနဲ့ ခယျြလျဆီးနဲ့ပှဲကို ပရိသတျတဈဦးအဖွဈ ကွညျ့ရှုခဲ့ရပါတယျ။ အကွောငျးကတော့ လကေ့ငျြ့ခနျးအစီအစဉျမှာ အသငျးရဲ့နညျးဗြူဟာတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး နညျးပွဘငျနီတကျဇျ Benitez နဲ့ စကားမြားခဲ့လို့ပါပဲ။ ဘငျနီတကျဇျကလညျး သူ့နညျးဗြူဟာတှနေဲ့ ပတျသကျလာရငျ ဆတျဆတျထိ မခံတတျတာကွောငျ့ ခကျြခငျြးပဲ လကျဆဲလကျဈကို ပှဲထှကျကစားသမားစာရငျးက ခနျြလှပျခဲ့တယျ။ အဲဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး မီဒီယာတှရေဲ့မေးမွနျးမှုကို ဘငျနီတကျဇျက “ကြှနျတျောတို့မှာ နောကျခံလူတှေ အမြားကွီးရှိတာပဲ”လို့ ခပျမာမာပဲ ဖွကွေားခဲ့တယျ။
အရှကျရစရာ အမှားကြူးလှနျခဲ့တဲ့ ITV
နာမညျကြျော ရုပျသံလိုငျးတဈခုဖွဈတဲ့ ITV ရဲ့ အမှားကတော့ အရှကျရစရာလညျးကောငျး၊ ရယျဖို့လညျး ကောငျးခဲ့တယျ။ နယူးကာဆယျနဲ့ပှဲ ပထမပိုငျးမှာ ခယျြလျဆီးနောကျခံလူ ရူဒီဂါ Rudiger ရဲ့ကနျခကျြ ဂိုးပေါကျနဲ့ သိသိသာသာ လှဲခြျောခဲ့ပမေယျ့ ITV က သူတို့ရဲ့ Twitter မှာ ‘GOALLLL! Out of nowhere, Rudiger sends inapowerful drive,’ဆိုပွီး ရေးသားခဲ့တာပါ။ ITV က ရူဒီဂါကို လှောငျခငျြတာလား၊ ဘယျလိုလဲဆိုတာ မသိပမေယျ့ ခယျြလျဆီးပရိသတျတှကေတော့ ဒီမှားယှငျးမှုကို မကနြေပျကွပါဘူး။ ITV က အဲဒီ Post ကို ခကျြခငျြးပွနျဖကျြခဲ့ပမေယျ့လညျး Screen Shot တှေ မိခဲ့လို့ အရှကျကှဲခဲ့ရပါတော့တယျ။
ဒါတှကေတော့ နယူးကာဆယျ-ခယျြလျဆီးပှဲနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ထူးခွားခကျြတှဖွေဈပါတယျ။ နောကျပှဲတှကေရြငျလညျး ဘယျလိုထူးခွားခကျြတှရှေိမလဲဆိုတာကို ဆကျလကျဖျောပွပေးသှားဦးမှာပါ . . . .